बुधबार, भदौ २४, २०७७ सारङ्गी न्युज
कहिलेसम्म लकडाउन ?
प्रकृतिमा सृष्टिदेखि हालसम्म कैयौं उतारचढाव आइरहेका छन् । भूहलचल, उल्काबज्र, सुनामी, आँधी, बाढी, पहिरो, महामारी, चट्याङलगायतका विपत्तिका घटनाहरुबाट मानव सङ्कटमा परिरहेको तथ्य इतिहासहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । यस्ता भयावह विकरालले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याउनुका साथै मानव समुदायका अतिरिक्त सम्पूर्ण प्राणीहरुलाई समेत जीवन यापनमा कठिनाइ उत्पन्न गरिदिएको छ । खानपानलगायत सम्पूर्ण प्राणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मकता उत्पन्न गरी वृद्धि र विकासमा बाधा पु¥याएको छ । कतिपय जातिको विसर्जन तथा कतिपय लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको हालको परिदृश्यले देखाउँछ । यस किसिमका विपत्तिाबाट मानवको आर्थिीक, सामाजिक, राजनैकि, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा मन्दी आई विकासमा तगारो लाग्न पुग्दछ । चाहना र इच्छाविपरीत निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न ज्यादै कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ । फेरि यस्ता विपत्तिका दिनहरु अनायास र एक्कासि देखा पर्ने र सो विपत्ले सोचाइभन्दा फरक परिवेश उत्पन्न गराउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ । यस्ता प्रकोपले मानव जीवनलाई सङ्क्रमणतर्फ घचेटिरहेको छ ।
यो रोग पनि सामान्य उपचारपछि निको हुने अवस्थामा देखिने छ । त्यसपछि मात्र मानवीय जीवन यथास्थितिमा आई विकासात्मक कार्यमा अघि बढ्ने छ तर मानिसले पूर्ण रुपमा सावधानी अपनाउनुपर्ने नै हुन्छ ।
केही समयअघि चीनमा देखा परेको त्रासदीपूर्ण र भयङ्कर डरलाग्दो रोग कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) आज विश्वका अधिकांश देशहरुमा महामारीका रुपमा फैलिइरहेको छ । विकराल त्रासदीबाट अहिले विश्व नै त्रसित हँुदै गइरहेको छ । विकासात्मक कार्यहरु ठप्प छन् । आर्थिक विकासको स्तर ज्यादै न्युन हुँदै गइरहेको छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा, स्कुल, कलेज सबै बन्द छन् । मानिसहरु त्रासले घरमा नै क्वारेन्टिन बनाई बसेका छन् । काम नपाउँदा मानिसहरुको रोजीरोटीको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । भावी दिनहरु कसरी बित्ने हुन् ? अवस्था कस्तो हुने हो ? सुरक्षित रहने औषधि आजसम्म पनि थाहा हुन सकेको छैन । मानिसहरु घररुपी जेलमा जकडिएका छन् । देशका सरकारहरु लकडाउनका माध्यमबाट रोग नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नमा जुटिरहेका छन् । यसलाई पर्वाह नगरी मानिसहरु बिनाकाममा पनि आवजजावत गरिरेका छन्, जसका कारणबाट महामारीयुक्त भाइरसले विस्तारित हुने स्थिति आई यसले कैयौंको ज्यान लिइसकेको छ । बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई यस महामारीले सताएको छ ।
विनाशकारी रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । चीनमा यो रोग नियन्त्रणमा आइसकेको छ । त्यही विधि एवम् प्रविधिलाई उपयोग गरी विश्व मानव धनको रक्षा नितान्त जरुरी छ । रोकथामका उपायलाई अबलम्बन गर्दै जाँदा वैज्ञानिकहरुले त्यसको औषधि पत्ता लगाउने छन् । फलतः विश्व समुदायले स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउने छन् । यो रोग पनि सामान्य उपचारपछि निको हुने अवस्थामा देखिने छ । त्यसपछि मात्र मानवीय जीवन यथास्थितिमा आई विकासात्मक कार्यमा अघि बढ्ने छ तर मानिसले पूर्ण रुपमा सावधानी अपनाउनुपर्ने नै हुन्छ ।
कोरोनाबाट अरु देशहरुभन्दा अमेरिका तथा युरोपीय देशहरु ब्ढी आक्रान्त बनेका छन् । एसियाका देशहरुमध्ये भारत बढी प्रभावित बनेको छ । यी देशहरुमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरु हताहत भइरहेका छन् । विश्वका सबैजसो मुलुकहरु यस महामारीबाट पीडित भइरहेका छन् ।
सत्य कुरालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी हुन्छ । मानिस चेतनाको अग्र पङ्क्तिमा रहेको प्राणी, जसले विश्व परिवेशलाई नजिकबाट नियाल्न सकेको छ । यस्तो चिन्तक, साधक, विवेकी, उच्च बौद्धिक प्राणी, जसको प्रयासबाट उन्नतिको शिखर चुम्न सफल बनेको छ । यस किसिमको विवेकी मानव आज किन अटेर गरी सत्य वचनलाई पचाउन सकिरहेको छैन । बुझ्नलाई कठिन भइरहेको छ । एक कुहेको आलुले गोदामका सबै आलुलाई सडाइदिए झैं एक कोरोनायुक्त व्यक्तिले सम्पूर्ण मानव समुदायलाई सङ्क्रमित बनाउने भएकाले सरकारबाट निर्देशित नियमलाई पालना गर्दै आफू र आफ्नाको भलाइ गर्नु आजका मानवको कर्तव्य हुन आउँछ । यसलाई शिरोधार्य गरी घरमै बसौं, सङ्क्रमितहरु क्वारेन्टिनमा जाऊँ, डाक्टरको सल्लाह अनुसार उपचारमा रहौं । सङ्क्रमितलाई हेला हैन मायाले सद्भाव देखाई सहयाग गरौं । यसैमा सबैको कल्याण छ ।
कोरोनाबाट अरु देशहरुभन्दा अमेरिका तथा युरोपीय देशहरु ब्ढी आक्रान्त बनेका छन् । एसियाका देशहरुमध्ये भारत बढी प्रभावित बनेको छ । यी देशहरुमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरु हताहत भइरहेका छन् । विश्वका सबैजसो मुलुकहरु यस महामारीबाट पीडित भइरहेका छन् । यसको बिगबिगी दिनानुदिन अङ्क गणितीय तवरबाट उर्लिरहेको छ । यस असहज परिस्थितिमा सतर्कताका साथ सुरक्षित रहँदै महामारीलाई परास्त गर्नुपर्ने हाम्रो चुनौती बनेको छ । भविष्यमा यसले लिने रुप थाहा नभए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न मानवको निगरानीपूर्ण व्यवहारले सघाउँदछ । अतः सबैले तत्सम्बन्धी नियमको पूर्ण रुपमा परिपालना गरौं र गर्न लगाऔं । कोरोनालाई परास्त गर्दै आफू र आफन्तलाई बचाऔं । हामीले आ–आफ्नौ कर्तव्य पालना गरेनौँ भने लकडाउनका कारण उत्पन्न दुष्परिणाम अझै भयावह भएर जाने निश्चित छ । कतिपय नेपाली जनता लकडाउनका कारण कामविहीन बनेर रोगभन्दा बढी भोकले मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यो परिस्थितिबाट पार पाउनका लागि पनि अत्यवाश्यकबाहेकका हिँडडुल र भीडभाड गर्ने काम हामीले सुधार्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । होइन भने लकडाउन कहिलेसम्म लगाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको टुङ्गो कसैले पनि लगाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
‘सर्वेः भवन्तु सुखिनः सर्वेः सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माःकचित दुःखभाग् भवेत् !’
(लेखक रामकोट माध्यमिक विद्यालय, रुपा–७, कास्कीका प्रधानाध्यापक हुन् ।)
बुधबार, भदौ २४, २०७७, १८:१२:००